Pinć, Virtual Reality magirazi eiyo iPhone 6 | IPhone nhau
Kunyanya kana kushoma, zvirokwazvo iwe wakambonzwa nezve Oculus Rift, magirazi anotiunzira chaiwo chaiwo tekinoroji yezvikamu zvakawandisa, kwete zvekuvaraidza chete. Pinć izita revamwe chaiwo magirazi anoshandisa iyo iPhone 6 sehwaro hwekushanda kwayo uye nekudaro kuzadzisa mitengo yakaderera nekutora mukana wehunyanzvi hwakatove kuitwa naApple pachawo mune yayo terminal.
Kutanga kubva pachirevo ichi, Pinć anoenderera mberi uye anoda kuti isu tirege kungova vataridzi chete asiwo kuti tikwanise kushamwaridzana nenzvimbo chaiyo tiri kuona. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kuisa mhete mbiri, imwe kuruoko rumwe nerumwe kuitira kuti tiite mabara-akawanda ekubata uye kusangana pamwe nharaunda sekunge isu tave kuita basa raTom Cruise mune iyo Minority Report bhaisikopo.
¿Ndezvipi Hardware zvikamu zvichashandiswa naPin kubva kune iyo iPhone 6? Sezvaunogona kufungidzira, yekutanga ndiyo yekupedzisira skrini iyo ichaita seyakaongorora. Chikamu chechipiri chakakosha ndeye M8 coprocessor iyo ichave iri mukutarisira kunyoresa mafambiro atinoita nemusoro. Chekupedzisira, yekucherechedzwa kwekufamba kwemaoko edu, Pinć inotora mukana weiyo yekumashure kamera yeiyo iPhone 6.
Kubva pano, software ichave iri kutarisira tora mukana weyese Hardware yeApple nhare uye nekudaro tipe isu manzwiro echokwadi chaiwo sezvatisati tamboona. Pachavewo ne SDK inowanikwa zvichibva paUnijini injini injini kune chero munhu anoda kuvandudza mashandiro kana mitambo yePinć.
Kana iwe waifarira zano uye uchida kuwana iyo Pinć unit, mutengo wayo uri 99 madhora uye iwe unogona kutochengetedza iyo mumushandirapamwe weIndiegogo, chikuva chakafanana neKickstarter Kana vangosvika pamadhora zviuru zana zvavanokumbira, vachatanga kugadzirwa kweshanduro yekupedzisira yechigadzirwa chinosvika kudzimba dzevatengi vekutanga muna Chikumi 100.000.
Batanidzo - Pinć
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Virtual Reality magirazi akaziviswa e iPhone 6 nekudyidzana kwepakati
Slide2Kill8 Pro, tweak yekuvhara maapplication munzira dzakawanda